Imisebenzi yezandla yasekhaya - Imisebenzi yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe (Ikhasi 2)
Imisebenzi yezandla yasekhaya
Imisebenzi yezandla emi-5 yokuvuselela amagumbi ethu okuhlala kanye/noma amagumbi okulala anamakhushini
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona imibono yezandla engu-5 yokuvuselela amagumbi ethu okuhlala kanye/noma...
Ikhadi elinezinhliziyo ze-Pop Up
Uma uthanda ukwenza amakhadi omuntu siqu, nawu lo mbono owenziwe ngezinhliziyo ezimise okwe-3D. Umbono wangempela wosuku olukhethekile.
15 Izimbali Ezinhle Nezilula Zezandla Zephepha
Ingabe uthanda izimbali? Ngale misebenzi yezandla engu-15 enezimbali zephepha kuzohlala kuyintwasahlobo endlini yakho. Alula futhi mahle.
Imisebenzi yezandla yenhliziyo yoSuku Lwezithandani
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona imisebenzi yezandla eminingi, elungele ukulungiselela…
Indlela yokwenza izitsha zokuhlobisa
Zitholele indlela yokwenza amatshakaza okuhlobisa ukuze agcwalise noma yiliphi ikhona lekhaya ngombala noma ukuhlobisa izingubo nezinsiza.
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobheka ukuthi kwenziwa kanjani ubuciko bokuhlobisa ngoSuku lweValentine manje...
Imisebenzi yezandla ukuhlobisa ngokhokho
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona imisebenzi yezandla eziningana ukuhlobisa corks. Ngemva kwalokhu…
Imibono yokuhlobisa ngemva kokukhipha imihlobiso kaKhisimusi
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona imibono emihlanu yokuhlobisa ngemuva kokukhipha imihlobiso ...
Imibono yokuhlobisa itafula ngesidlo sasemini sikaKhisimusi nesidlo sakusihlwa
Sanibonani nonke! Ngesimo samanje kunzima kakhulu ukuhlangana, kodwa noma kunjalo, noma sihlangana nabantu abambalwa ukuze ...
15 imisebenzi yezandla yokuqala futhi enemibala ekwindla
Ngesimo sezulu sasekwindla esibandayo, uzizwa uthanda ukuchitha isikhathi esiningi usekhaya. Isikhathi esihle sokuzilibazisa yilezi zezandla zasekwindla eziyi-15 zasekuqaleni nezinemibalabala.
Imisebenzi yezandla eyi-15 edala kakhulu futhi enemibalabala yabantu abadala
Ungaphuthelwa le misebenzi yezandla engu-15 yokudala nenemibala yabantu abadala ukuze bachithe isikhathi sokuzijabulisa behlobisa indlu yakho nezingubo zakho.
Uphayinaphu ombozwe ngoshokoledi beFerrero ngoKhisimusi
Kulo Khisimusi ungaphuthelwa indlela yokwenza le uphayinaphu yasekuqaleni ngama-chocolates amaningi ngezandla zakho. Kuyisipho esihle kakhulu!
Imisebenzi yezandla yokuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi 2
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sikulethela ingxenye yesibili yalolu chungechunge lwemisebenzi yezandla esinga...
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sikulethela ingxenye yokuqala yochungechunge lwemisebenzi yezandla esingakwazi ...
I-Felt iguquguquka kakhulu ekukhiqizeni. Ungathanda ukuyizama? Bheka lezi zezandla eziyi-15 ezinhle nezizwakala kalula.
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sikulethela ubuciko bokuhlobisa uKhisimusi obu-5. Le misebenzi yezandla ihlukene, kusukela...
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizobona imisebenzi yezandla eminingana yokuhlobisa indlu yethu ngokufika ...
Izimbiza zevintage zokuhlobisa
Reinvent kabusha nalezi zimbiza zokuvuna ongazihlobisa ngezinyathelo ezimbalwa ezilula futhi uthole konke ukudala kwakho.
Kujabulele ukwenza ibhodwe eligcwele i-cacti yamatshe. Ziphelele ukwenziwa nezingane futhi ziyajabulisa futhi zigcwele umbala.
Okokuhlobisa amakamelo okulala ungakhetha phakathi kokuthenga izinto ezahlukahlukene ofuna ukuzifaka, njengesihlalo noma isibani ...
Ibhokisi lokuthunga elenziwe ngezandla
Zakhele ibhokisi lokuthunga elenziwe ngezandla ekhaya, ngembiza yengilazi, indwangu ethile, amakhadibhodi kanye ne-fluff for a cushion. Uzoyithanda!
Imisebenzi yobuciko engu-5 yokuphindisela ukubuya kwamaholide
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizokunikeza imibono emi-5 yobungcweti obusetshenziswe ngokuphelele be ...
Imisebenzi yezandla ewusizo yasekhaya
Sanibonani nonke! Esihlokweni sanamuhla sizokukhombisa imisebenzi yezandla emine elula futhi ewusizo kakhulu kuye ...
Izinsipho ezenziwe ngezandla
Kulo msebenzi wobuciko sizokufundisa ukwenza izinsipho ezilula kakhulu nezenziwe ngezandla, ufunde ukuphinda usebenzise insipho evela ekhaya.
Thola ukuthi ungenza kanjani amakhandlela amahle anephunga ezitsheni ezenziwe kabusha. Kungumsebenzi wobuciko wokuqala futhi okhethekile ukuhlobisa nokunikeza njengezipho. Thokoza
Ukwakha ikhandlela lokuhlobisa ikhandlela le-ayisikhilimu kulula, akubizi, futhi kungumsebenzi omuhle wokuba nesikhathi esithile ekhaya.
Lezi zikhwama zendwangu ekhabethe zingukuphefumula okuhle kwemvelo kokugqokisa izingubo ngephunga lakho olithandayo.
Ukumodela unamathisele ibhokisi lobucwebe
Ngabe ufuna ukudala ibhokisi lakho lobucwebe ngokunamathisela kokumodela? Ungaphuthelwa yilobu buciko lapho sikubonisa ukuthi ulakha kanjani leli bhokisi elihle lobucwebe.
Incwajana yokubhalela evuthiwe ngezinduku
Thola ukuthi ungayenza kanjani incwajana yokubhala evuthiwe ngezinye izinti ezilula zokhuni nopende omncane we-acrylic ozonikeza lokho kubukeka okuhle.
Ungahlobisa kanjani imbiza yengilazi ngenqubo ye-decoupage
Inqubo ye-decoupage yilokho ebesikusebenzise ukudala lo mbiza wengilazi omuhle futhi okhethekile ohlotshisiwe wezinaliti zokuluka.
Funda ukudala lo mdwebo omuhle ngemiklamo yangempela, ehlotshiswe ngezinkinobho zokukhanyisa amakhona akhetheke kakhulu ekhaya lakho.
Imisebenzi yezandla engu-5 ephelele yangaphandle uma kushisa
Sanibonani nonke! Ngesimo sezulu esihle sifuna ukuba sezindaweni ezingaphandle zezindlu zethu, ngakho-ke sikulethela ...
Ukuma ngokhuni kwamacici
Ngezinye iziqeshana zokhuni singakha lokhu kusekelwa okuhle ukuze ulengise amacici akho. Uzothanda ukuthi kulula kanjani ukukwenza.
Ipendende yekamelo lezingane
Uzoyithanda le pendende esesimweni sombambi wamaphupho ngenxa yokuthi kulula ukwenza kanjani nokuthi kuzoba okwangempela kanjani ukuhlobisa igumbi.
Ungaphuthelwa kulo mkhakha olula wokwenza umhlobiso we-reindeer ohlekisayo ukuhlobisa ikhaya lakho nomoya kaKhisimusi.
Funda ukuluka ngenhlanzi yamakhadibhodi
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza le nhlanzi enekhadibhodi enelukuluku iphelele ukuze ifunde ukuthi ...
Izimbiza ezihlotshisiwe zangasese
Sanibonani nonke! Kulo msebenzi wobuciko sizokwenza ezinye izimbiza ezihlotshisiwe ukugcina izinto zangasese ezifana namahlumela kakotini, ...
Abaphathi bezicabha ngentambo
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza lesi sibambi esihle sezintambo. Akukhona kuphela ...
Ibhasikidi elilukiwe nebhokisi lekhadibhodi
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza lo bhasikidi omuhle alukwe njenge-wicker nge ...
Hlukanisa okhiye ku-keychain ngendlela elula yezingane
Sanibonani nonke! Lo msebenzi wobuciko wenzelwe izingane eziqala ukusebenzisa okhiye futhi ukuze zihlukanise, ...
Isofa elinama-pallet wethala
Sanibonani nonke! Kumsebenzi wanamuhla sizokwakha usofa omuhle onamaphalethi evulandi ...
Inkomishi yamazinyo isetshenziswa kabusha ingilazi imbiza
Sanibonani nonke! Kulobu buciko sizokwenzela ibhodlela elihle lamabhulashi wamazinyo ngokuvuselela ibhodlela le ...
Senza izitsha ezintathu zensipho kakhokho
Sanibonani nonke! Kubuciko banamuhla sizokwenza izitsha ezintathu zensipho kakhokho. Ngamunye uhlukile. Bakhulu kakhulu…
Ibhodlela lokukhanyisa elihlotshisiwe
Ungaphuthelwa yileli bhodlela lokukhanyisa ukuhlobisa ikhaya lakho. Kulula kakhulu ukukwenza futhi uzodinga kuphela imizuzu emibili ukuthola imiphumela emihle.
Ama-sachets wemvelo anephunga lasekhaya
Kulo msebenzi sizokwenza izinhlobo ezimbili zezikhwama zemvelo ezinamakha ukuze sizinike iphunga elihle kakhulu ...
Ama-piy nezindlu zangasese zemvelo
Kulo msebenzi sikulethela okuhlukile kokujwayelekile, iqhinga lokwenza amaphilisi endlu yangasese ekhaya, ...
Qondanisa umdlalo ongu-XNUMX nenjoloba ka-Eva ewugqinsi
Lo mdlalo we-tic-tac-toe kulula kakhulu ukuwenza futhi izingane zizothanda nokudlala ngento ezizenzele yona.
Imibono yokwenza izipho zoqobo
Ungathola izindlela ezine zoqobo zokugoqa izipho zomcimbi okhethekile nowenziwe ngezifiso. Ngisungule isipho ukuze ngikwazi uku ...
Senza i-closet air freshener elula kakhulu
Kubuciko banamuhla sizokwenza i-air freshener yekhabethe elilula ukwenza futhi lapho ...
Izindlela ezintathu zokwenza amabhokisi ezipho
Eyomuntu siqu futhi elula ukwenza amabhokisi ukuze ukwazi ukugoqa yonke into kusuka kumaswidi kuye kunoma yisiphi isipho ofuna ukusenza. Ziyashesha futhi ziyajabulisa kakhulu.
Ikhandlela eliphuthumayo, elisheshayo ukwenza ukuhlobisa noma ukucima ugesi
Kubuciko banamuhla sizokwenza ikhandlela eliphuthumayo sisebenzisa uwoyela wewolintshi nowemifino. Kakhulu…
Senza ikhandlela lomiyane
Ngesimo sezulu esihle futhi ikakhulukazi ngokushisa okwenzayo, omiyane basebenza kakhulu. Ngakho siya ...
Isikhwama esinemisebenzi eminingi esivuselela amanye amabhulukwe
Kubuciko banamuhla sizokwenza isikhwama esinemisebenzi eminingi ngokusebenzisa kabusha amanye amabhulukwe. Kuyindlela elula nesebenzisekayo ...
Ibhokisi lobucwebe lamasongo, indlela enhle nelula yokuwagcina
Kulo msebenzi sizokwenza ibhokisi lobucwebe ukugcina amasongo ngendlela ehlelekile. Ngenxa yalokhu sizosebenzisa kabusha ...
Iphalethi le-Eyeshadow: Umbono woku-oda izithunzi zezimonyo
Kubuciko banamuhla sizobona indlela elula yoku-oda izithunzi zezimonyo: iphalethi ...
Uzimele wesithombe ngezinti zePole zezithombe zePolaroid
Ungaphuthelwa yile Frame Frame ye-DIY Polaroid enezinti ze-Popsicle ... kulula ukuzenza futhi zibukeka zihle!
Indwangu yetafula yomuntu ngamunye isetshenziswa kabusha indwangu yetafula yenjoloba
Ingabe unazo izindwangu zerabha ezilimele? Impela kukhona ingxenye ethile engasetshenziswa ukwenza indwangu yetafula ngawodwana ...
Ama-coasters amathathu ahlukene futhi alula anezintambo
Kulobu buciko sizokwenza ama-coasters amathathu anezintambo ezilula nezasekuqaleni esizisebenzisayo ekufikeni kwesimo sezulu esihle.
Ibhokisi le-sitrobheli eliphakanyisiwe eliphakanyisiwe
Ingabe unebhokisi lama-strawberry ekhaya? Kungani ungawuvuseleli ngokuwuguqula uwenze itrivet ephakanyisiwe ngosizo lwezintambo ezithile?
Isihlanganisi sasekhaya namanye amaqhinga okukhulisa umswakama ekhaya
Isimo esomile endlini singacasula kwesinye isikhathi, ukusixazulula, sizokwenza isihlanganisi esenziwe ekhaya namanye amaqhinga.
Uyenza kanjani imbiza ngezinto zokwakha izinti
Incazelo yendlela yokwenza ibhodwe ngezinto zokwakha kabusha izinti. Ilungele ukunika indlu ukuthinta oku-rustic nokwesimanjemanje.
Uyenza kanjani idoli ye-octopus ngoboya
Incazelo yendlela yokwenza ubuciko be-octopus ngoboya. Imininingwane ngezinto zokwakha, izithombe nemininingwane yenqubo.
Imbali yezimbali ivuselela ibhodlela lepulasitiki
Incazelo yokuthi ungayenza kanjani imbiza epulasitiki elengayo yendlu yethu. Ilungele ukusetshenziswa kabusha, ukwenza kube ngokwakho ikhaya lethu nokonga izinsiza.
Indlu yezinyoni ivuselela ibhokisi lamapulangwe
Incazelo nenqubo yokwenza indlu yezinyoni kabusha ngebhokisi lokhuni. Kulokhu, ukusebenzisa ibhokisi lewayini.
Ungasenza kanjani isibani sentambo kalula
Namuhla sizobona indlela yokwenza isibani esihle sentambo ngendlela elula, esheshayo, enhle futhi eyongayo, ezosihlanganisa noma kuphi!
Ikhishi Izesekeli isiphanyeko nge Pyrography
Ungasizakala kanjani nganoma isiphi isigaxa sokhuni ukwenza iziphanyeko zasekhishini ezine-pyrography futhi ezenziwe zaba ngezakho ukuthanda kwethu.
Imisebenzi yezandla kaKhisimusi e-3 enamashubhu wephepha langasese
Siyaqhubeka nemibono kaKhisimusi futhi kulokhu ngizokufundisa ubuciko obusetshenzisiwe bokusebenzisa kabusha amapayipi amaphepha ethoyilethi. Ziphelele ukwenziwa ekhaya. Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zingcweti ngamashubhu ephepha langasese ukuhlobisa uKhisimusi wakho futhi unikeze ukuthinta okuhle kakhulu endlini yakho kule sizini samaholide. Phinda usebenzise kabusha kalula.
CRAFTS KAKHISIMUSI ngokusetshenziswa kabusha. 3 Imihlobiso kaKhisimusi
Kokuthunyelwe kwanamuhla ngizokufundisa ukuthi ungenza kanjani ama-CHRISTMAS CRAFTS ama-3 ngokusetshenziswa kabusha kwezinto esinazo ekhaya. Zilula kakhulu futhi ungenza Funda ukuthi ungayenza kanjani le mihlobiso kaKhisimusi ukuhlobisa indlu yakho ngoKhisimusi. Ungasebenzisa izinto esinazo endlini futhi ngeke kukubize imali eningi.
Ikhadibhodi yesihlahla sikaKhisimusi ukuhlobisa izindlu ezincane
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu ngoKhisimusi izihlahla. Kwesinye isikhathi asinayo indawo ekhaya ngoba zinkulu kakhulu. Kulokhu okuthunyelwe ngizofunda ukuthi ngingenza kanjani lesi sihlahla sikaKhisimusi ngokuvuselela amakhadibhodi kusuka kumabhokisi okusanhlamvu, silungele izindlu ezincane ngoba asithathi isikhala.
Ukhilimu kaKhisimusi onamashubhu wephepha langasese
Kokuthunyelwe kwanamuhla ngizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani lo muhlobiso kaKhisimusi olula futhi ongabizi kakhulu ngokuvuselela amashubhu amakhadibhodi avela ethoyilethi noma ephepheni lasekhishini. Funda ukuthi ungawenza kanjani lo mhlobiso kaKhisimusi ngokuvuselela amashubhu amakhadibhodi kusuka ethoyilethi noma ephepheni lasekhishini. Kulula kakhulu ukukwenza.
Ungazisebenzisa kanjani kabusha izimbiza zengilazi. 3 IMIBONO ELULA
Eposini lanamuhla sizofunda ukusebenzisa kabusha izimbiza zengilazi futhi sizokwakha imibono emi-3 emihle ...
Ungayenza kanjani i-piggy engu-3 ilandelana nge-eva rubber
3 ilandelana ngumdlalo wendabuko othanda izingane kakhulu ngoba kulula futhi kulula ukudlala umdlalo. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungafunda kanjani ukuthi ungakwenza kanjani lokhu oku-3 kulandelana ngokuma kwengulube enerabha ye-eva, umdlalo ofanele wabancane endlini, ngokuqinisekile bazoba nokuzijabulisa okuningi !!!
Ungawasebenzisa kanjani kabusha amakani kathayela ukwenza amabhokisi ezipho
Ukwenza kabusha imfashini kakhulu. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungawasebenzisa kanjani kabusha amakani kathayela uwaguqule abe amabhokisi ezipho njengawokuqala njengalena. Funda ukuthi ungayisebenzisa kanjani kabusha le thini noma ithini le-aluminium bese uyiguqula ibe ibhokisi lesipho langempela ngemininingwane ethile.
Uyenza kanjani iHawaii ngokuvuselela kabusha imiqulu yamaphepha asendlini yangasese
Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungawasebenzisa kanjani kabusha amashubhu wamakhadibhodi asendlini yangasese bese uwaguqula abe yile Hawaiian ekwazi ukuhlobisa indlu yakho ehlobo. Kuyinto yokufunda ukwenza lesi Hawaiian ngemiqulu yamathoyilethi noma ekhishini bese uhlobisa indlu yakho uyinike ukuthinta okufudumele kakhulu, okuhle ezinganeni.
Ungawenza kanjani umkhumbi wepirate usebenzise kabusha amakhokho ezingane
IPirates yizinhlamvu ezithandwa ngabancane endlini ngoba ziyingxenye yamabhayisikobho abawathandayo kanye nokuzijabulisa okujwayele ukubonwa ku-Funda ukwenza lo mkhumbi wepirate ontanta emanzini osebenzisa kabusha amakhokho, umsebenzi wobuciko ophelele kunawo wonke amancane ekhaya.
Isikhiye esinomyalezo wobuhlalu behama ngiyakuthanda
Funda ukuthi ungasenza kanjani lesi sikhiye esinobuhlalu be-hama, uphelele ukuhlobisa okhiye bakho noma ubhaka futhi okuhle ukwenza nezingane ehlobo.
Amabhukhimakhi enziwe ngokhuni ane-pyrography nombala
Funda ukuthi ungenza kanjani leli bhukumaka lezincwadi zakho useholidini ngenqubo ye-pyrography, ungenza idizayini oyithanda kakhulu.
Uzenza kanjani izimbali zephepha ngemibuthano
Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zimbali eziphelele zephepha lemisebenzi yakho yobuciko kanye ne-scrapbooking ngemibuthano yamaphepha elula.
Ama-decoupage coasters wezipho zosuku lomama
Funda ukuthi ungazenza kanjani lezi zinhlayiya zokhuni ezihlotshiswe nge-decoupage zilungele ukunikeza umama wakho ngosuku lwakhe, uqinisekile ukuthi uyabathanda.
I-albhamu yezokuvakasha ukuze ubambe izithombe zeholide
Funda ukuthi ungayenza kanjani le albhamu ukuze ubeke zonke izithombe zamaholide akho owathandayo futhi ukhumbule lezi zikhathi oye wahlala kuzo nabangane noma nomndeni.
Isikhumbuzo sokubhapathizwa noma ukugeza kwengane amawele noma amawele
Funda ukuthi ungasenza kanjani lesi sikhumbuzo esifanele sokugubha ukubhapathizwa noma ishawa yezingane futhi unikeze imininingwane emnandi kuzo zonke izivakashi zakho.
Indlela yokwenza umdwebo wezingane usebenzisa ama-watercolor namakhadibhodi
Funda ukuthi ungawenza kanjani umdwebo walezi zingane ngokusebenzisa kabusha amakhadibhodi ukuhlobisa noma iyiphi ikona lendlu yakho bese uyinika ukuthinta kwangempela.
Igundane elincane elenziwe ngenjoloba ye-eva ukugcina amazinyo akho
Funda ukuthi ungayenza kanjani le Fairy yamazinyo ephelele yabancane endlini lapho bangagcina khona amazinyo abo lapho ephuma.
Isiphanyeko somnyango wezingane. Hlobisa igumbi lakho
Kulokhu okuthunyelwe ngizokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani le hanger yomnyango wezingane ephelele ukuhlobisa noma yiliphi igumbi lomfana noma lentombazane.
Ungayenza kanjani i-air freshener emise okwenhliziyo.
Ku-tic yanamuhla ngikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-air freshener emise okwenhliziyo, imininingwane esebenzayo nehlobisayo ezoba nhle ngoSuku lukaValentine ukuhlobisa indlu bese uyibeka ngalelo phunga olithanda kakhulu.
Amabhukumaka esihlahla sikaKhisimusi anerabha ye-eva yezingane
Funda ukuthi ungenza kanjani leli bhukhimakhi elihle elibunjiwe lomuthi kaKhisimusi labancane endlini ukuze bafunde lesi sikhathi samaholide.
Ungayenza kanjani i-rustic vase ngokusebenzisa kabusha imbiza yengilazi
ungayenza kanjani i-rustic vase, uvuselele imbiza yengilazi. Ingasetshenziswa njengendawo ephambili noma ukuhlobisa noma yiliphi iphuzu lendlu.
Ungenza kanjani iphosta ekhuthazayo, ukuyibeka lapho uthanda khona kakhulu.
Sizobona ukuthi ungenza kanjani iphosta ekhuthazayo, ukuyibeka lapho uthanda khona kakhulu, eyenziwe ngokhuni nangokubukeka okudala.
Ungayenza kanjani ipeni ngokubhala kabusha ngokusebenzisa ingilazi ye-crystal
ungayisebenzisa kanjani kabusha ingilazi yekristalu, ukuyiguqula ibe ipeni noma umnikazi wepensela, manje njengoba inkambo iqala futhi sifuna ukuhlobisa ideski lethu.
Umnikazi weselula owenziwe ngamaroli amakhadibhodi
Funda ukuthi ungayenza kanjani le rainbow imele iselula yakho eyenziwe ngamaroli amakhadibhodi okuhle ukubeka iselula yakho edeskini lakho
Ungayenza kanjani i-chandelier ngokusebenzisa kabusha isisekelo sesibani
Sizobona indlela yokwenza ikhandlela ngokusebenzisa kabusha isisekelo sesibani, sinikeze okunye ukusetshenziswa kwalelo lambu ongasasisebenzisi futhi ongafuni ukulisusa.
Ungasenza kanjani isibani samakhandlela se-rustic ngokusebenzisa kabusha imbiza yengilazi
Sizobona ukuthi singenziwa kanjani isibani samakhandlela sisebenzise kabusha imbiza yengilazi. Kuzoba wusizo kulabo busuku basehlobo ku-terrace.
Kawaii cactus magnet ukuhlobisa ifriji yakho ehlobo
Funda ukuthi ungayenza kanjani le kawaii magnetic eva rubber cactus iphelele ukuhlobisa ifriji yakho kuleli hlobo bese uyinika ukuthinta kwasekuqaleni.
Isibani sokufaka esimweni sebhola lebhola.
Ungenza kanjani isibani esime njengebhola likanobhutshuzwayo. Isesekeli esimnandi segumbi lezingane uma bethanda ibhola.
Umhlobiso we-flowerpot we-DIY, siphinda sisebenzise kabusha imbiza yezimbali ngokushintsha ukubukeka kwayo.
Umhlobiso webhodwe le-DIY ukushintsha ukubukeka kwalelo bhodwe le-bland elingakutsheli lutho, libe yimbiza ejabulisayo neyomuntu uqobo.
Ungenza kanjani uzibuthe we-ice cream efrijini
Funda ukuthi ungayenza kanjani le magnet esesimweni sika-ayisikhilimu noma i-lolly ukuhlobisa isiqandisi noma isiqandisi ekhaya kuleli hlobo nge-foam eva
Isikhiye sezimvu esinamakhompiyutha ezingane
Funda ukwenza lesi sihluthulelo sezimvu usebenzisa amapompo ngendlela elula kakhulu, kuhle ukuhlobisa ojosaka bezingane.
Ungayenza kanjani imenyu yamasonto onke ukuze uhleleke
isiphakamiso inhlangano engakuxazululela sona ngaphezu kwesikhathi sokonga: Ngizokukhombisa ukuthi ungayenza kanjani imenyu yamasonto onke ukuze uzihlele.
Uyenza kanjani i-fishbowl yezingane ngembiza yengilazi
Funda ukuthi ungenza kanjani leli thangi lenhlanzi lezingane eliphelele ukuhlobisa amakamelo ezingane futhi ungathathi isikhala esingenasidingo esiningi.
Isembozo sefu se-Kawaii seselula yakho eyenziwe ngokuzizwa
Funda ukuthi unglenza kanjani leli cala leselula elenziwe ngesitayela se-felt ne-kawaii ngefu elihle langempela elifanele izingane
Yenza i-coaster yakho enemibala eminingi ngemizuzu emihlanu
Kulesi sifundo sizobona ukuthi ungazenzela kanjani i-coaster yakho enemibala ngemizuzu emihlanu, ephelele ukwenza nezingane.
Isifundo se-motif sokuhlobisa
Kokufundisa kwanamuhla ngikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani i-motif yokuhlobisa ngembiza yengilazi noma ibhodlela ngomphumela wothando futhi omuhle.
USanta Claus ukuhlobisa isihlahla sakho sikaKhisimusi nge-eva rubber
Funda ukuthi ungawenza kanjani lo mhlobiso osesimweni sikaSanta Claus ukuhlobisa isihlahla sakho sikaKhisimusi usebenzisa igwebu le-eva. Okufanele ukwenze nezingane.
Ungawenza Kanjani ama-Coasters aBabazekayo
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi uwakha kanjani ama-coasters afakwe embossed. Kubukeka kuyinkimbinkimbi kepha udinga izifanekiso ezithile ze-stencil.
Isiphathi sangempela sokuhlobisa itafula lakho ngoKhisimusi
Funda ukuthi ungasenza kanjani lesi sibambi sokuhlobisa itafula lakho ngoKhisimusi futhi sikwenze kube yinhle kakhulu futhi kungokoqobo. Ngezinyathelo ezimbalwa ezilula futhi kulula kakhulu.
Ipuleti lokuhlobisa likaKhisimusi ne-snowman
Funda ukuthi ungalenza kanjani leli cwecwe elihle lokuhlobisa likaKhisimusi labancane abasendlini ukuhlobisa igumbi labo ngendlela yoqobo.
Ingelosi yenjoloba ka-Eva ukuhlobisa isihlahla sakho sikaKhisimusi
Funda ukuthi ungayenza kanjani le ngelosi ukuhlobisa isihlahla sakho sikaKhisimusi noma yimuphi umsebenzi wobuciko walezi zinsuku ngendlela yokuqala.
Inkanyezi kaKhisimusi enezinduku zokhuni nabahlanza amapayipi
Funda ukuthi ungayenza kanjani le nkanyezi kaKhisimusi ngezinduku zamapulangwe nezihlanza amapayipi, okulungele ukuhlobisa indlu yakho noma isihlahla sakho sikaKhisimusi kulezi zinsuku.
Inothi ophethe i-snowman ngoKhisimusi
Hlobisa ihhovisi lakho noma indawo osebenza kuyo ngoKhisimusi ngalomnikazi wememo emise okweqhwa emise okweqhwa.
I-DIY: Izimbiza ze-infusions
Namuhla ngikulethela i-DIY entsha: sizokwenza ezinye izimbiza zokumnika. Ukusizakala ngezimbiza ezithile zengilazi ukuziguqula zibe izimbiza zokumnika.
Sisebenzisa kabusha amathini kathayela
Kubuciko banamuhla sibanga amanye amakani kathayela njengento yokuhlobisa ekhoneni lendlu yethu, ewenza amathanga.
Ithanga lokuhlobisa le-DIY
Ngalesi DIY ungenza imininingwane yendlu yakho, sizobona ukuthi ungenza kanjani ithanga lokuhlobisa ukuthi lezi zinsuku ze-Halloween zizokulungela.
Ungayenza kanjani intshakaza yesihluthulelo
Kokufundisa kwanamuhla sizobona ukuthi ungayenza kanjani intshakaza yesihlalo sokhiye kube lula kakhulu futhi kulula ukuyenza futhi ngomphumela ozokumangaza.
Imisebenzi yezandla kawaii. Okhiye bamakhukhi
Funda ukuthi ungenza kanjani lokhu kukhiye okwe-kawaii okwe-cookie nge-eva rubber kube lula kakhulu. Umphumela muhle, ungowasekuqaleni futhi uyashesha ukwenza.
Yenza ikhethini igxathu negxathu
Kubuciko banamuhla sizokwenza ikhethini igxathu negxathu, ngendlela elula, kepha ngokuthinta okuhle emphumeleni wayo wokugcina.
Ungayenza kanjani isiphanyeko ngezinhlamvu ze-3D kalula futhi ngokushesha
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayakha kanjani i-hanger enezinhlamvu ze-3D, ezinhle kumagumbi okulala ezingane, engeza ukuqala kwemibala emincane kakhulu futhi ekhanyayo.
Ungenza kanjani amakhadibhodi nezimbali ze-Eva Gum
Uma uthanda izimbali, uzothanda lesi sinyathelo ngesinyathelo, ngizokukhombisa ukuthi ungenza kanjani izimbali zamakhadibhodi ne-Eva Gum, ukuhlobisa ikhaya lakho.
Umnikazi wamakhandlela onezibuko
Ungenza kanjani abaphathi bamakhandlela baphinde basebenzise ezinye izingilazi, ubanikeze umoya we-rustic nothando, ukusetha noma iliphi ikona emcimbini okhethekile.
Uzenza kanjani izihluthulelo zama-pom pom keychains
Isinyathelo ngesinyathelo sokwenza okhiye bezinsika ngama-pom pom ukuhlobisa izikhwama, izikhwama zemali noma okhiye bakho nje.
I-rustic vase ivuselela ibhodlela lewayini
Sizokwenza i-rustic vase ngokusebenzisa kabusha ibhodlela lewayini. Ingasetshenziselwa ukuhlobisa noma iyiphi ikhona lendlu.
Izimbiza ezinamaphilisi wekhofi nenjoloba ye-eva
Funda ukuthi ungawasebenzisa kanjani kabusha amaphilisi ekhofi bese uwaguqula abe yilezi zimbiza ezinhle.
Ungazenza kanjani izibani zamakhandlela e-glitter
Sihlanganyela nawe, ukuthi ungazenza kanjani iziphathi zamakhandlela ezinto zokuhlobisa izinto zasendlini noma enye indawo ekhaya lakho, bheka isinyathelo ngesinyathelo esiphelele.
Uyenza kanjani itrivet ngezinduku ezakhiwe ngokhuni
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungayakha kanjani i-trivet enezinduku ezakhiwe ngokhuni. Futhi ukuyihlobisa ungafunda nokusebenzisa inqubo ye-decoupage.
Ungawenza Kanjani ama-Faux kaMose Faux Clay
Kulesi sifundo ngikukhombisa ukuthi ungadala kanjani ama-coasters obumba wokulingisa wobumba. Kulula futhi kuyashesha ukukwenza, futhi kunezinketho eziningi zokuziklama.
Omazibuthe abanezingubo zokugqoka ukuze banikeze ngosuku lomama
Sabelana ngombono wokuqala wokunikela njengesipho ngoSuku Lomama, ukuthi ungenza kanjani odonsa ngezindwangu zokugqoka
Ngobuqili benhlangano, sihlela amateyipu futhi sinabo abakulungele ukuwathola hhayi ukuhlangana nabanye.
Uyenza kanjani i-garland yenkanyezi
Wenza kanjani ama-garland ezinkanyezi ukuhlobisa amakamelo ezingane, isikhunta sifakiwe silungele ukuphrinta
Namuhla sizokwenza incwadi ye-3D ngendlela elula kakhulu, sizodinga kuphela incwadi kakhokho evela kulabo abathengiswa ezitolo ezinkulu
Ungasifaka kanjani isichibi ebhulukweni
Namuhla ngikukhombisa indlela emnandi yokubeka isichibi ebhulukweni. Impela akusuki.
Sizobona igxathu negxathu lokuphinda usebenzise i-can ukuyinika ukubukeka okuyingqayizivele ngokuyihlobisa ukuze iphinde isetshenziswe njengomtshali.
Gcina amacici amancane
Kulobu buciko sikukhombisa ukuthi uwagcina kanjani amacici amancane futhi uwahleleke kahle nokwenza kube lula ngathi ukuthi siwathathe kubucwebecwebe.
Ama-coasters we-DIY ajabulisayo
Ungawenza kanjani ama-coasters amahle azwakala ngesikhathi esithile futhi uchaze ubuntu betafula lakho. Kulesi sifundo uzothola impendulo.
Izimbiza ezincane zivuselela izimbiza ze-ceramic
Izimbiza ezincane zamapheya amancane acijile, i-cacti noma ukuqala kubuciko be-bonsai noma yini oyithandayo kakhulu, futhi nokuvuselela ingilazi noma izimbiza ze-ceramic yogurt.
Ingubo yenhliziyo enendwangu eluhlaza
Indwangu enhle yenhliziyo enendwangu e-fluffy kolunye uhlangothi nendwangu kakotini kolunye. Okuluhlaza okukhanyayo ukufanisa nokuhlobisa ikona lethu eliyintandokazi.
Omazibuthe abanamandla babamba yonke into yesiqandisi.
Ozibuthe abanamandla babalulekile ukuze sikwazi ukubamba wonke amaphepha ethu esiqandisini noma umhlobiso noma njengesipho.
Ukwazi ngentambo yesikibha kanye ne-crochet ngendlela eyindilinga
I-athikili ye-DIY exuba i-crochet nendwangu. Ngale ndlela, singenza izesekeli ezingenakubalwa zekhaya. Amarabi, ama-trivets, ama-coasters ...
Ikhava yesikhuni engenaziphu ngendwangu ephrintiwe.
Ikhava yesikhukhi sendwangu ephrintiwe ngaphandle koziphu, umphelelisi ofanele ukuhlobisa noma yiliphi ikhona lekhaya lethu noma ukunikeza othile okhethekile.
Ama-Coasters we-Felt anemibala yangempela
Ngala ma-coasters azwayo unganikeza ukuthinta koqobo nobuciko emicimbini yakho noma ekudleni kwakho. Ama-Felt Coasters angumphelelisi ofanele wetafula lakho.
Ukusatshalaliswa kwesampula ngesampula yezinto ezenziwe kabusha ezenziwe kabusha, eziguqulwa zibe ikhava yeduvet, enezinto ezishibhile kakhulu, futhi ezifinyeleleka ngokuphelele ngesikhathi esifushane.
Ibhayi lesikibha elenziwe kabusha
Umbhoxo onemiphetho ngezinto ezenziwe kabusha. Ezinye izinto zishibhile kakhulu. Yize kunzima, kulula kakhulu ukukwenza ngaphandle kolwazi lwangaphambili
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani umcamelo omnandi wamakati. Into ebalulekile kubathandi bekati.
Isikhwama sokudala esinamajini
Kulesi sihloko sikukhombisa isikhwama sokudala nesinhle esenziwe ngama-jeans amadala. Umbono omuhle wokuphinda usebenzise kabusha.
Iselula enezigaba zeNyanga
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungayenza kanjani iselula ehlukile ngezigaba ezahlukahlukene zeNyanga, umhlobiso omuhle wekamelo.
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungazisebenzisa kanjani kabusha izivimba zikakhokho ukwenza umhleli onelukuluku akwazi ukulengisa izibuko ngendlela ehlelekile.
Omazibuthe abanezitishi zikakhokho
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi isivalo sikakhokho esilula singaba kanjani odonsa bamafriji abajabulisayo.
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani umbhede wekati olula futhi olula ngebhokisi lezithelo elilula. Ilungele isilwane sethu.
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungawenza kanjani umhlobiso omuhle, olula futhi osheshayo wokwenza umug wenziwe ngezifiso. Isipho sangempela esivela kuMakhosi.
Izimbali zeSanta Claus
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ungenza kanjani ama-garland amancane kulawo makhona amancane esifuna ukuwahlobisa ngoKhisimusi ngezimpawu zikaKhisimusi.